Ny 2008 TIME dia tsy nahasarika mpilalao fizahan-tany bebe kokoa
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Ny 2008 TIME dia tsy nahasarika mpilalao fizahan-tany bebe kokoa
Oktobra 17, 2008
Ireo mpilalao fizahan-tany ao an-toerana mandray anjara amin'ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany momba ny fizahantany 2008 (TIME) natao tany Makassar tamin'ny taona XNUMX dia naneho ny fahadisoam-panantenany noho ny tsy fahombiazan'ny hetsika hisarika mpividy vahiny maro hafa.
Ny mpikarakara ny hetsika, notanterahina ny talata ka hatramin'ny zoma tao amin'ny Celebes Convention Center, dia nametraka tanjona varotra 10 ambony noho ny mart 2006, izay natao ihany koa tao Makassar.
Mpividy vitsivitsy monja no nanatrika ny lanonana, ary fivarotana maro no tsy misy olona ary mitarika ny mpivarotra ao an-trano haneho ny fahadisoam-panantenan'izy ireo tamin'io hetsika io.
Ny mart, natao voalohany tamin'ny 1994, dia nahasarika mpandray anjara tamin'ny sehatry ny seranam-piaramanidina, hotely, fialantsasatra, trano fisakafoanana, fitsangatsanganana sy spa, ary koa maso ivoho ara-kolontsaina sy fizahan-tany avy amin'ny faritany sy isam-paritra.
Nilaza ny mpikarakara ny hetsika fa ankoatry ny mpivarotra 108 avy amin'ny faritany 16, mpividy 104 avy amin'ny firenena 21, ao Australia, Hong Kong, Hongria, India Italia, Malezia, Filipina, Singapore, Korea atsimo, Espana, Etazonia ary Vietnam, no mandray anjara amin'ny hetsika amin'ity taona ity.
Meity Robot, filoha lefitry ny komity mpitantana ny taona 2008, dia nilaza fa mikendry fampakarana 10 isan-jato ny mpikarakara ny alarobia hatramin'ny 2006 tapitrisa dolara amerikana tamin'ny 15.
Nanatrika izany ihany koa ny mpanao gazety 15 sy mpanoratra fizahantany avy amin'ny firenena sivy.
Ny ankamaroan'ny mpivarotra dia nilaza fa matahotra ny tsy hahatratra ny tanjon'ny varotra izy ireo, miaraka amina mpividy vitsy dia vitsy.
Anita Verhoeven, talen'ny fitantanana ny Sunda Trails, dia nilaza fa diso fanantenana tamin'ny TIME tamin'ity taona ity.
"Tena diso fanantenana aho fa tsy mahita mpividy vitsivitsy tonga fotsiny amin'ilay hetsika," hoy izy.
“Ny isa dia kely kokoa noho ny tamin'ny TIME 2006. Matahotra aho sao tsy tratrantsika ny tanjona kendrena. ”
Ho fanampin'ny tsy fahampian'ny mpividy, nitaraina ihany koa i Anita momba ireo fotodrafitrasa fanampiana sy toerana izay nambarany fa tsy mitovy amin'ny fampahalalana nomen'ny mpikarakara.
Gerit B. Polli, mpitantana ny varotra sy ny marketing amin'ny Absol absolute Leisure avy any Lombok, Nusa Tenggara Andrefana, dia naneho fihetseham-po mitovy amin'izany.
"Nanana fotoana nifanaovana tamina mpividy 60 aho ary maro amin'izy ireo no nanao fifanarahana teny an-toerana," hoy i Gerit.
“Fa ankehitriny dia tsy mino aho fa hahatratra ilay tanjona. Tsara vintana aho raha afaka manisy tombo-kase na dia ny antsasaky ny isan'ny fifanarahana toy ny tamin'ny taon-dasa aza. ”
Ny mpivarotra voalohany, Andi Tjipto Hardianto, talen'ny masoivohon'ny fizahan-tany TX any Java afovoany, dia nilaza fa nanantena zavatra bebe kokoa amin'ny hetsika izy.
"Manantena aho fa afaka mampiroborobo ny toeran'ireo mpizahatany ao Java Afovoany amin'ny mpividy betsaka araka izay azo atao mandritra ity hetsika ity," hoy izy.
Sapta Nirwandar, tale jeneralin'ny marketing an'ny Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny fizahantany dia nilaza fa nanantena izy fa ny 2008 TIME dia hanampy an'i Indonezia hahatratra ny tanjon'ny mpizahatany vahiny 7 tapitrisa amin'ity taona ity. Efatra tapitrisa no nitsidika ny firenena hatramin'ny volana Aogositra.
Ny governora lefitra ao Sulawesi atsimo, Agus Arifin Nu'mang dia nilaza fa nanantena izy fa handray soa ity faritany ity amin'ny fampiantranoana ny mart mart, miaraka amin'ireo toerana fizahan-tany isan-karazany ao amin'ny faritany mora azon'ny mpividy.
Nanampy i Agus fa ny hetsika dia afaka manatsara ny fizahan-tany any Atsinanan'i Indonezia, izay efa tanjon'ny fizahan-tany kilasy manerantany.